Iraaqiyiinta kiristaanka oo ku soo wajahan Sweden | Somaliska
Iraaqiyiinta kiristaanka oo ku soo wajahan Sweden
Ka dib xaalada kacsan ee ka jidha waqooyiga wadanka Iraq halkaasoo la sheegay in ururka IS (Islamic State) ee ku dhow Al-Qacida ay bartilmaameed ka dhigteen dadka Kiristaanka ah ayaa Laanta Socdaalka Sweden ay sheegtay in ay isku diyaarinayaan in kumanaan Kiristaan ah ay iska dhiibaan Sweden.
Ururka IS ayaa la sheegay in ay guryahooda ka saareen dad gaaraya 100 000 qof kuwaasoo naftooda kala baxsaday ka dib markii lagu amray in ay Muslimaan ama ay isaga baxaan dhulka. Ururka IS ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka ay kula jiraan ciidamada wadanka Iraq iyo kuwa Kurdiyiinta. IS ayaa waxaa ka tirsan dhalinyaro badan oo qaarkood ay Soomaali yihiin kuwaasoo ka tagay wadanka Sweden iyo wadamo kale oo reer galbeed ah.
Laanta Socdaalka ayaa horay u filaysay in qiyaastii 89 000 qof ay Sweden iska dhiibaan sanadkaan balse hadda ayaa la filayaa in tiradaas ay si aad ah sare ugu kacdo maadaama xaalada wadanka Iraq ay ka sii darayso.
Rabshado ka dhacay mudaharaadka Göteborg [Video – Sawirada]
labo sano says:
August 8, 2014 at 14:00
Arintii labada sano somalida lugu heestsy yaa war ka haaya beryahaan. Maxaa cusub dhankaaas.
August 8, 2014 at 22:12
arinti labada sano waayahan wax kahadlayo aniga ma arag, balse meeshan qofki aad weeydiisaa su,aashaas dad waxaa kujira dadka kudaba gadinaya ama sixun oogu jawaabaya oo aanba garanayn si xun ujawaab mooye ,wanaagba aan aqoon.
waaxaan jimcale kaa codsanayna iin uu no shego telfonkisa
waxay waye magalada ludvika dhawaan waxaa lagu qabanaya banaanbaax somaliyeed oo lagu tagerayo rerki uu kaa baxay marxuun dhalin yaro aah oo magaladaan walidkisuna daganaa oo sii sharci daro aah dhakhtarka loga soo celiyeed 4 jeer marki uu sakaradayey oo lagu yidhi biyo caab kadibna uu wiilki dhintay
taasi ayaa ino dambaysay , jawiga magala oo xuun iyo somali badaan oo leh waan kaa cararayna ludvika
Nimanka ka dagaala caalamka Islaamka badanaa lama hubo inay hayaan wadadii saxda aheyd ee Jihaadka hadayse hayaa waa hayaan oo Alle ha toosiyo hadeyse Yuhuud iyo Gaalo kale ay soo dirsadeen Islaamka ha qaldinina iyo dadka akle ee Krishtaanka ah ee sida nabadda ah ku wada nool. Kuwaana waxaad moodaa in ay yihiin kuwa Soomaaliya dagaalka kawada ee weli aan ogoleyn in la xaliyo dhibaatada Soomaaliya ee 24 jirsatay si aan u xalino dowladnimadeena aana uga baxno silica iyo gaajada, jahliga bara kaca saameeyey Soomaalida dhan meel kasta oo ay aduunka joogto. Ragggan Jihaadka la boodboodayana waxay u shaqeeyaan dano kale oo aan islaam aheyn waa haddii la fiiriyo xaqiiqooyin badan oo la arkay. Tusaale ahaan:- Nin waxaa jiray Oromo ah oo Shiikh C/qaadir la oran jirin qolooyinkii Al-Itixaad la baxay ee Ithiopianka la diri jirey degmadda Luuq ee gobolka Gedona ka diri jirey ayuu ku soo biiray Jihaad wax lagu sheegay ayey Iclaamiyeen Al-Itixaadkii markii danbana u kala jabay Al-ictisaam oo garabyo badan u sii kala baxay Shabaabka maantana kuwa beerayw aa kuwaas. Ninkii Shiikh C/qaadir ahaa ee Jihaad ku heyn jirey oo Amxaarada iyo Tigreega la diri jirey Usaamana kor Allaha ka yeelo dhihi jirey markii Al-Itixaadka la jabiyey ee ay Raas Kambooni iyo Muqdisho u kala carareen asagu Ethiopiankii ayuu raacay oo u galay wuxuuna ahaa basaas ay soo dirsadeen ool jirey kaana salaad badnaa kaana wacdi iyo alle ka cabsi badnaa Soomaaliyeey cida hogaan kuuq abneysa ee aad diinta uga shiikh yeelaneyso ka fiirso hana noqdo nin caqiido fiican oo culumadii ahlullaahiga aha wax ka qaatey ha noqdo.
Walaal arrinta aad sheegaysid waa arrin aad u xun hadday tahay sida aad u sheegaysid, Ilahayna ha u naxariisto wiilka somaliyeed i dhintay. Lakin fikrad ahaan aniga waxan oran lahaa haddii mar la hayo docoments-ka dhacdada willka ku dhacday, waxa jira hay’ado ka shaqaya sidii ay u kontroli lahaayeen khaladaadka ay ku dhacaan dhakhaatiirta oo isla markaasna la xisaabtama. Haddii ay sax noqoto oo la caddayo in wiilka yari u geeriyooday khalad dhanka dhakhtarka ah, waxa hubaal ah in dhakhtarkaas maxkamad la soo tagi karo, ama xitaa laga yaabo in uggolaanshaha dhakhtarnimada lagala laabto. Muddaaharaadka waa shacabka oo muujinaya dareenkooda ku aaddan arrintaas laakin sida qaanuuniyan ah ammay sidaan ku fiicantahay.